Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Jolay 2021 à 06:31
185 octets ajoutés , il y a 11 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Martsa 2021 à 14:30 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Jolay 2021 à 06:31 (hanova) (esory)
[[Sary:Samaritans marking Sukkot on Mount Gerizim, West Bank - 20051017.jpg|vignette|331x331px|Samaritana mankalaza ny fetin'ny Tabernakely (na Sokota) eo amin'ny tendrombohitra Gerizima.]]
Ny '''[[Samaritana]]''', izay atao hoe '''Israelita samaritana''', dia vahoaka monina ao [[Isiraely|Israely]] sy [[Sisjordania]], ka ao [[Samaria]], tanàna ao amin'ny tapany avaratr'i [[Palestina]], no tany nonenan'ireo razany izay nanjaka tao mandraka amin'ny taonjato faha-5. Tsy milaza ny tenany ho [[Jiosy]] izy ireo nefa mihevi-tena ho taranaky ny [[Israelita]] fahiny nonina tao amin'ny [[Fanjakan'i Israely (Samaria)|Fanjakan'i Israely]] tao avaratra tao Samaria. Misy ny Jiosy mihevitra azy ireo ho taranak'olona vahiny tsy Israelita. Na tamin'ny andro mifanandrify amin'ny zavatra tantaraina ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]] dia navakavahan'ny Jiosy ny Samaritana. Ny [[Isiraely|Fanjakan'i Israely]] amin'izao fotoana izao anefa dia manao ny Samaritana ho Jiosy.
Manana fivavahana mifanakaiky amin'ny [[Jodaisma|fivavahana jiosy]] azy manokana, atao hoe ''samaritanisma'', ny Samaritana, nefa ny boky dimy voalohany ao amin'ny [[Baiboly]] ihany (atao hoe [[Pentateoka]]), fa tsy ny [[Baiboly hebreo]] manontolo, no ekeny ho [[Soratra Masina]]. Ny tendrombohitra [[Tendrombohitra Garizima|Gerizima]] no tendrombohira masina fa tsy i [[Ziona]] na Siona. Manana ny abidiny manokana koa izy ireo dia ny [[abidy samaritana]] izay tsy mitovy amin'ny [[abidy hebreo]]. Amin'izao fotoana izao dia misy ny Samaritana israeliana sy ny Samaritana jordaniana ary ny Samaritana palestiniana. Vitsy izy ireo satria tamin'ny taona 2007 dia 796 no isany.
Ny Baiboly anefa tsy tena miresaka mazava ny amin'ny fanjavonan'ireo fokon'i Israely folo. Ohatra, ny [[Bokin'i Jeremia]] (Jer. 41.5) dia mitatitra fa 150 taona taorian'ny faharavan'ny [[Fanjakan'i Israely (Samaria)|Fanjakan'i Samaria]], izany hoe raha vantany vao rava i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K., dia tonga nitondra fanatitra ho an'ny [[Tempolin'i Jerosalema]] ny mponin'i Israely Avaratra: "lehilahy miisa valopolo tonga avy any Sikema (na Sekema), avy any Silo ary avy any Samaria, niharatra volom-bava, nandrovitra akanjo, sady nandididy ny hodiny (ho mariky ny fisaonana). Nitondra voan-javatra sy emboka manitra hatao fanatitra ho an'ny Tempolin'i Iahveh".
=== Fiheveran' ny Jiosy sy ny Kristiana sasany ===
Na dia manalasala aza ny fitantaran' ny Baiboly dia mihevitra ny [[Jodaisma ortodoksa|Jiosy ortodoksaôrtôdôksa]], toraka izany koa ny Kristiana sasany, fa ny Samaritana dia tsy afaka hihambo ho taranak' ireo [[Foko folo very|foko folo]] tao Israely. Tsy ireo Samaritana ireo no ho fitohizam-pisian' ireo foko izay nanjavona amin' ny fomba tsy fantatra ireo; taranak' olona tsy Israelita tao amin' ny mpijirika [[Asiria|Asiriana]] tamin' ny [[Andro Taloha]].
=== Fiheveran' ny manampahaizana ===
Ny fivavahan'ny Samaritana, izay mifototra amin'ny [[Torah]], dia tsy ahitana soritra fomban'ny mpanompo sampy. Tamin'ny taonjato faha-6 dia nitantara ny [[Bokin'i Jeremia]] fa nanao fanatitra tao amin'ny [[Tempolin'i Jerosalema|Tempoly]] izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1012852"